Sanchez oo si dhab ah kaga fiirasanaya inuu ka dhaqaaqo kooxda Manchester United, sababab la xiriira Mourinho – Gool FM
Sanchez oo si dhab ah kaga fiirasanaya inuu ka dhaqaaqo kooxda Manchester United, sababab la xiriira Mourinho
( Manchester) 01 Okt 2018. Xidiga kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa ka xanaaqsan qaabka uu ula dhaqmay Jose Mourinho kulamadii lasoo dhaafay, wuxuuna si dhab ah uga fiirsanayaa inuu baxo.
29 jirkan ayaa kaga soo biiray kooxda Manchester United dhigeeda Arsenal suuqii January ee lasoo dhaafay, kadib markii ay labada kooxood ku heshiiyeen inay is dhaafsadaan xidigaha Sanchez iyo Henrikh Mkhitaryan.
Laakiin laacibka reer Chile ayaan soo bandhigin qaab ciyaareedkii ay sugayeen jamaahiirta garoonka Old Trafford, wuxuuna ku guuldareestay xili ciyaareedkan inuu dhaliyo wax gool ah.
Kadib hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Alexis Sanchez, macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa ku qasbanaaday inuu ka saaro qorshihiisa kulankii West Ham ay guuldarada 3-1 kala kulmeen.
Wargeyska Daily Mirror ayaa sheegay in Alexis Sanchez uu haatan si wanaagsan kaga fiirsanayo ka tagista kooxda Manchester United, ka dib markii Jose Mourinho uu dhawaan ka saaray liiska ciyaartoyda United, inkastoo uu safar ugu maqnaa London.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Alexis Sanchez uu yahay xidiga labaad ee khilaaf uu kala dhexeeyo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho kadib Paul Pogba.
Valverde oo laga dirayo Barcelona iyo shaqsi caan ah oo badali doona!
Maradona oo ku la taliyay Messi inuusan dib ugu soo laaban xulka Argentina